Ikhaya STARS E-EUROPE I-Brahim Diaz Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso "Tu-Messi wenza uMalaga". Indaba yethu yeBrahim Diaz Ingane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama emlandweni wezindaba, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nomthinta wakhe omangalisayo, umbono, ikhono lokudlula neliso lomgomo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-biography yeBrahim Diaz okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Isiqalo sokuphila
Ukuqala, amagama akhe aphelele yiBrahim Abdelkader Díaz. UBrahim Diaz njengoba eyaziwa ukuthi wazalwa ngo-3 August 1999 kubazali bakhe noMnu. Abdelkader Díaz eMalala, eSpain eSpain. Ngezansi isithombe esithandekayo sebaba wakhe nomama wakhe othandeka kakhulu.
UBrahim Diaz uvela emndenini waseMorocco esebenzisa umkhulu wakhe owafuduka eMorocco waya eSpain ngokusebenzisa ogwini lwaseMedithera yase-Afrika aboniswe ngezansi.
Ukufuduka eMorocco ukufuna impilo engcono, umndeni kaBrahim Diaz wahlala eMelilla, idolobha elizimele laseSpain ngaphambi kokuthuthela eMalaga lapho u-Abdelkader ehlangana khona nomkakhe nendodana yabo uBrahim yazalwa kamuva.
Njengoba kubonwe esithombeni esingenhla, uBrahim Diaz cishe uyindodana yokuzalwa futhi yindodana kuphela emndenini wakhe owakhiwa odadewabo abakhulu kakhulu abamazwi abo abangaziwa. Bobabili uBrahim kanye nabantakwethu bakhulela eMálaga, idolobha laseSpain elisesidolobheni elisaphila kakhulu nezinsalela zokubusa kwamaSulumane ezithanda isiko lamaSulumane eSpain.
Ekuqaleni, uBrahim wakhula ibhola lezemidlalo futhi efunda ukudlala umdlalo emasimini wendawo nabangani. Wayekhethile ukuba abe ngumdlali webhola oqeqeshiwe owamqondisa kude nezinye izinqumo zomsebenzi ayezozenza lapho esemncane. Kusihlwa ukudlala ibhola emasimini asendaweni kaMalaga ngokuqinisekile bekukhokha izinzuzo njengoba kuholela ekubhalweni kwabafundi.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Uthando lukaBrahim Diaz lwebhola lunikeza abazali bakhe ukubhalisa indodana yabo egumbini le-academy club yakhe yaseMalaga eyamnika ithuba lokubeka isisekelo esihle semfundo yasencane.
Ukuphila esikoleni kuyamnandi futhi uBrahim omncane kwakudingeka enze imihlatshelo eminingi ekwenzeni ubuntu bakhe bebhola njengengane.
Ekuqaleni kwakhe ebusheni, uBrahim waqala ubuntu obuhlukile. Wayenguye mfana othobekile futhi ohoxisiwe okwazi ukubhekana necala elikhulu ngokulingana nendlela ayephatha ngayo ibhola.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Njengoba uBrahim eqhubeka ethuthuka, wazibona ehamba phambili phakathi kweontanga zakhe. Lokhu kwaletha ingcindezi eqhubekayo yokwenza lokho ayekwazi ukubhekana nayo. Ngenxa yokuthi wayenguye ongcono kakhulu, uBrahim wanikezwa iJersey ye-No.10 eyayigqoke kuphela abadlali abaphezulu kakhulu esikoleni sikaMalaga.
Inombolo yeqembu lesibonakaliso inenhlanhla njengoba ephumelela ngempumelelo emaceleni eminyaka. UBrahim waba udumo wobuntwana ngemuva kokufaka imigomo ebalulekile.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukuphuma ku-Comfort Zone:
Iqembu leNkulunkulu ye-Premier League liye laletha abadlali abaningi baseYurophu abayithembisayo kakhulu kanti omunye wabakwaBrahim Diaz. Ku-2015, uke waxoshwa eMalaga ngo-Manchester City FC eneminyaka engu-16 ngemali eyi-£ 200,000.
Ukufunwa nje kuyisimo esiqinisekisayo sokuthi umSpanishi osemusha owazi ukuthi udinga ukuvezwa emasiko amasha, indlela yokuqeqesha kanye nomkhuba.
Ngo-21 ngo-September 2016, uDíaz wenza i-debut yakhe yeqembu lokuqala eDolobheni ayenzile ukuze kumangele izixuku. Ngemva kwezinsuku ezinhlanu, uBrahim wasayina isivumelwano sakhe sokuqala noMkhandlu, iminyaka emithathu. Waba yisihloko sokudlulisela phambili ukuxilisa ngemuva kokuhluleka ukunikezwa isiqiniseko seqembu lokuqala Pep Guardiola.
"Lolu suku olubaluleke kakhulu empilweni yami lwagcwaliseka. Usuku i UMesiya waseMalaga wagcwalisa iphupho lakhe ngokusayina i-Real Madrid.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ubani umlingani kaBrahim Diaz?
Nakuba kungenzeka ukuthi yi-19 kuphela enomsebenzi omncane (njengesikhathi sokubhala), imibono efihlakeleyo yeBrahim Diaz yiyona eyiphumelele ukuhlolisiswa kweso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu futhi ayidlala.
Iqiniso liwukuthi, uBrahim Diaz ugcine iphrofayli ephansi yokuthandana njengoba engekho imithombo ye-intanethi yokucabangela ukuthi usebudlelwaneni noma u-WAG.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo kaBrahim Diaz kuyokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele kuye.
Ubuciko bomuntu kaBrahim Diaz we-Tiger:
Kufakazelwe kusuka kuye Akhawunti ye-Instagram. Ngokuvumelana ne I-TcG, AmaTigers ajwayele ukuhlala emazweni amakhulu. Yingakho uBrahim Diaz eshiya iNingizimu yeSpain (indawo yakhe yokududuza) eNorth West England kwezinye izinto ukuze uthole isiko elisha, indlela yokuqeqesha kanye nomkhuba.
Ama-tigers anesifiso esinamandla. Uma sebakha izingqondo zabo, ngeke basishintshe kalula. Lokhu kuchaza isizathu sokuthi kungani uBrahim Diaz engenakuvinjelwa Pep Guardiola emzamweni wakhe wokuthuthela eMadrid.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
Iqiniso liwukuthi; UBrahim Diaz akayena uhlobo lomdlali webhola lezinyawo ohlala eLevish Lifestyle kalula ebonakalayo ngezimoto ezimbalwa ezinhle kakhulu. Ngisho nasensimu yakhe yokunethezeka yasekhaya, uBrahim wenza umsebenzi omkhulu wokuthola izinyawo zakhe zikhululekile nebhola emoyeni nasemhlabathini.
Incazelo yenqubo yokuphila yeBrahim ngokwezwi nezwi itholakala ukuba nenkantolo yebhasiksi yenhloso yebhola ekhaya.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
UBrahim Abdelkader Díaz uvela emlandweni womndeni othobekile, owodwa amalungu akhe abona ukuthi uyajabula ngokuba neBrahim empilweni yabo.
Nakuba kungenjalo ngokwezimali ngokwezimali ekuqaleni, abazali bakaBrahim Diaz kanye nabafowabo, odadewabo noMalume noMalume bonke babe negalelo ekukhipheni okuhle kakhulu kuye.
Ngemuva kokuhamba kukaDiaz eMadrid, kungenzeka ukuthi amanye amalungu emndenini wakhe ayezophuma eMalaga ukuhlala naye eMadrid.
UBrahim Diaz Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Isigatshana esivumelwaneni sakhe sangempela:
Inkontileka yeBrahim Diaz ne Real Madrid eqhubeka kuze kube yilapho i-2025 inesigatshana esingakholeki kuso. Lesi sigaba sichaze ukuthi i-40 iphesenti yokuthengisa eyokwamukelwa yiDolobha IF U-Díaz usuka eMadrid futhi udlulisela eManchester United.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeBrahim Diaz Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
KK Ngo-Ephreli 6, 2019 E-4: 36 pm
Ukwazisa kakhulu futhi kubhalwe kahle. Ngiyabonga
I-Nasir umar NgoJulayi 1, 2019 E-7: 58 pm
Ingabe i-ibrahim diaz ungummuso?